Boeing 737-800 Jet2.com 1 sano 10 bilood ka hor #1202
Waan soo degsaday B738 jet2 oo im ayaan ku isticmaalayaa P3d v4.3. Diyaaraddu si fiican ayey u shaqeysaa inta badan alaabtii laakiin maanta waxaan gartay in taayirrada aysan kor u sii socon. Sidookale habsami u dhaqaaqin.
Arrinta layaabka leh ayaa ah in sabab uun jirta, oo aanan khaladaad ku haysan ama wax uun diyaaradda ay sigaar ku bilowdo dhexe sabab la'aan.
Noqoshada daacadnimada haddii boodh ama laba darajo aan la guurin aysan wax khatar ah ahayn laakiin sababaha loo yaqaan 'esteetic reasons' waa wax la yaab leh in taayiradu aysan kor u kacin. Inta kale waan maamuli karaa.
Time si ay u abuuraan page: seconds 0.211